Sinoa tsara indrindra indrindra any Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Sinoa tsara indrindra indrindra any Eoropa
(Last Nohavaozina: 10/04/2021)
Authentically Masiaka ary tian-dry zareo tsy mampino tsirony, Shinoa tsara sakafo dia indraindray sarotra ho avy amin'ny any Eoropa. Na izany aza, ny vaovao tsara dia hoe misy manan-danja indrindra any Eoropa Shinoa - tsy maintsy fantatrao hoe aiza no ahitana azy ireo, ary ny fomba ahatongavana any. Koa satria ny ankamaroan'izy ireo dia eo amin'ny tanàna eoropeanina lehibe, na kapitaly, fa tsaratsara kokoa ny tonga lamasinina.
Miaraka amin'ny tsara lamasinina lasa haingana Network fa Eoropa mirehareha, fa azo atao ny mahazo na aiza na aiza ao amin'ny resaka ora - ary hankafy Toerana mahafinaritra lalana teny an-dalana ihany koa. Ho anareo izay mitady mafy ny sasany any Azia sakafo foto-tsakafo, eto no tsara indrindra Shinoa indrindra any Eoropa, sy ny fomba ahatongavana any lamasinina:
Ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana mifantoka amin'ny manome ny mpanjifa mba hanandrana zavatra lehibe. Na izany aza, ny Ranomasina Lapan'ny in Amsterdam mikendry ny hanome anao amin 'ny traikefa izay tsy anjara ny tsimon'ny tsiro, fa ho mora ihany koa ny eo amin'ny maso. Nanao tahaka ny pagoda, mitsinkafona io trano fisakafoanana tonga lafatra toerana haka aina miaraka amin'ny sasany amin'ireo tsara indrindra avy any sakafo Shinoa.
Rice vilia, dumplings, mofo, lohataona horonana - ianao anarany izany, izy rehetra dia eo amin'ny menio ary manandrana tena izy toa raha tany Chine ianao. Izany inona no andrasana avy amin'ny iray amin'ireo tsara indrindra Shinoa indrindra any Eoropa. Raha tianao ny hahazo any Amsterdam lamasinina, ianao dia afaka misambotra ny fiaran-dalamby avy any Paris mitaingina, Berlin, sy ny hafa Eoropa tanàna.
Hanover ho any Amsterdam Lamasinina
Luxembourg an'i Amsterdam Lamasinina
Dortmund an'i Amsterdam Lamasinina
Tsara namana sy sinoa tsara indrindra indrindra any Europe - Berlin, Alemaina
Ao an-tanàna chock-feno trano fisakafoanana Shinoa, ambara iray amin'ireo tsara indrindra sinoa tsara indrindra any Eoropa mihazona heviny manokana. any amin'ny Kantstrase, ao Berlin ny Chinatown, Namana Tsara dia fananganana Izay mirehareha ny sakafo be dia be sy ny tena sakafo tarehy ny Shinoa na mpifindra monina sy mpizaha tany.
Tsy mandeha diso raha mitsidika Namana Tsara rehefa ao Berlin. To mahazo any Berlin, ianao afaka maka ny fiaran-dalamby avy any saika misy tanàna lehibe any Eoropa ka mitoera ao anatin'ny ora.
Dortmund an'i Berlin Lamasinina
Dusseldorf ho any Berlin Lamasinina
Dresden ho any Berlin Lamasinina
Heidelberg ho any Berlin Lamasinina
Hangzhou - Rome, Italia
Rehefa mieritreritra ny Italia, Matetika isika no tsy mifandray izany ny sakafo Shinoa. Raha mahatsapa toy izany koa ianao, Azo inoana fa ianao ho gaga ianao hahafantatra fa ny Italianina atao manana toerana malefaka for Shinoa specialties. Ary ny iray amin'ireo tsara indrindra sakafo Shinoa indrindra any Eoropa, Hangzhou, Azo antoka fa manaporofo fa filazana.
Tsy incorporates Italiana sasany fitaoman, fa ny ankamaroan 'ny sakafo dia azo itokiana Shinoa sakafo tsy maintsy miezaka Raha tsapanao fa mitady any Roma. Tour Italia lamasinina mba hanao izay hitranga, na haka ny fiaran-dalamby Roma avy amin'ny iray amin'ireo renivohitra eoropeanina hafa.
Cite Du Dragon dia mazava ho azy fa anisan'ny Toeram-pisakafoanana sinoa tsara indrindra any Eropa - Bruxelles, Belzika
Trano fisakafoanana iray hafa Izay mirehareha ny mahafinaritra anatiny SY ZARIDAINA famolavolana ny mahagaga eo anilan'ny vilia, Cité Du Dragon in Brussels dia manan-jo niantso ny anankiray tamin'ny Sinoa tsara indrindra indrindra any Eoropa. maherin'ny 300 seza sy tsara tarehy haingo ny zaridaina, mahatsapa ianao tahaka anao nandeha ho tsara Oriental nofy. Izay mety ho sakafo mahagaga, fa izahay kosa hanome toky ny vola kely sy ny trano manokana, Peking gana, toy ny zavatra roa tsy maintsy miezaka ianao raha mitsidika Bruxelles lamasinina.
Bruges any Brussels Lamasinina
Maastricht ho any Brussels Lamasinina
Halle any Brussels Lamasinina
Ghent ho any Brussels Lamasinina
China Kitchen No. 27 - Vienna, Aotrisyny
Ao amin'ny Chinatown any Vienne, China Kitchen No. 27 Matetika no voalaza ho iray amin'ireo tsara indrindra. Raha tianao ny sakafo Masiaka, izany no toerana. Izy ireo ihany koa ny manolotra sakafo tsy mahazatra kokoa ny sasany, toy ny orita salady, fahazoan-dalana aza isika Gong Bao akoho raha te-hifikitra amin'ny Classics. Afaka nandeha tany Vienne mora foana lamasinina avy amin'ny ankamaroan'ny tanàna lehibe Eoropa, koa aza malahelo fa ny fahafahana.
Dortmund ho any Vienne Lamasinina
Dresden ho any Vienne Lamasinina
Heidelberg ho any Vienne Lamasinina
Dusseldorf ho any Vienne Lamasinina
Vonona ny sample ny lovia mahafinaritra ny sasany amin'ireo tsara indrindra sakafo Shinoa indrindra any Eoropa? Boky ny fiaran-dalamby tapakila tany am-boalohany, ary mitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby mba hitondra anareo any amin'ny lehibe manaraka gastronomical traikefa nahafinaritra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chinese-restaurants-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#asianfood #Toeram-pisakafoanana tsara indrindra #chinesefood europetravel fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby nankany